यूट्यूब एम्बेड किन्नुहोस् - YTpals
तपाईं के प्राप्त गर्नुहुनेछ?
ब्लग एम्बेडबाट उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिंक्स
उच्च YouTube खोज रैंकिंग (SEO)
उच्च भिडियो लोकप्रियता र प्राधिकरण
लामो अवधि, लामो दिगो परिणामहरू
तपाईंको भिडियो एम्बेडिंग सक्षम हुनु पर्छ
तपाईंको भिडियोको जैविक खोजी परिणामहरू र ट्राफिक सुधार गर्न मद्दत गर्न YouTube एम्बेडहरू खरीद गर्नुहोस्।
संख्या र एम्बेडको गुणवत्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यूट्यूब रैंकिंग कारक हो।
YouTube ले भिडियोको लोकप्रियता र अधिकार तर्फ भिडियो एम्बेड गर्दछ।
तपाइँको भिडियोको लोकप्रियता र अधिकार जति उच्च हुन्छ, यूट्यूबले यसलाई उच्च स्तरमा राख्दछ र यति अधिक तिनीहरूले यूट्यूबमा भिडियोहरू हेर्ने अन्य मानिसहरूसामु यो प्रदर्शन गर्नेछन्।
यस सेवाले कसरी काम गर्दछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ?
जब तपाईं यो सेवा अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईं एक भिडियो सबमिट गर्नुहुनेछ जुन तपाईं हामीलाई अन्य वेबसाइटहरूमा इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ।
अर्को धेरै दिनहरूमा, हामी तपाईंको भिडियो सयौं निजी वेब २.० वेबसाइटहरूमा इम्बेड गर्नेछौं ताकि तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको भिडियोले धेरै अधिक प्रदर्शन प्राप्त गर्दछ। गुगलले तपाईंको भिडियो यी सबै वेबसाइटहरूमा इम्बेड गरिएको देख्नेछ र तुरून्त तपाईंको भिडियोलाई बढी लोकप्रिय बनाउँदछ र त्यसैले उच्च अधिकार पाउनेछ।
यो उच्च लोकप्रियता र प्राधिकरणले YouTube लाई उनीहरूको खोज परिणामहरूमा तपाईंको भिडियोलाई उच्च श्रेणीकरणमा लैजान्छ र यूट्यूब भिडियोहरू हेर्ने व्यक्तिहरूमा उनीहरूको वेबसाइट भरमा प्राय: यसलाई प्रदर्शन गर्दछ।
यूट्यूब इम्बेडिंग के हो?
के तपाइँले कुनै वेबसाइट वा ब्लगको भ्रमण गर्नुभएको छ जुनमा YouTube भिडियो प्रदर्शित भएको थियो? त्यो इम्बेडिंग हो!
यदि तपाइँको भिडियो एम्बेडिंग सक्षम गरिएको छ (यो पूर्वनिर्धारित द्वारा सक्षम गरिएको छ), तब जो कोहीले तपाइँको YouTube भिडियोलाई उनीहरूको वेबसाइटमा वा तिनीहरूको सामाजिक मिडिया प्रोफाइल भित्र इम्बेड गर्न सक्दछ।
जब यो हुन्छ, यो महान छ! तपाइँ तपाइँको भिडियो को निःशुल्क, सहज प्रचार हो।
YouTube एम्बेडका फाइदाहरू के हुन्?
तपाईंले तपाईंको अर्डर गरेपछि, हामी तपाईंले सबमिट गर्नुभएको भिडियो लिन्छौं र यसलाई आला-सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा इम्बेड गर्न सुरु गर्दछौं।
हामी नयाँ अर्डरहरूमा काम गर्न सुरु गर्दछ 24-72 घण्टा भित्र तिनीहरू राखिए पछि। त्यसो भए, यो वितरण समाप्त गर्न को लागी अर्को हप्ता लाग्नेछ।
मैले मेरो अर्डर गरे पछि के हुन्छ?
के यो सेवाले मात्र मेरो भिडियोलाई सफल बनाउँछ?
हो र होईन। यस सेवाले तपाइँको यूट्यूब रैंकिंग र जैविक यातायात बढाउन मद्दत गर्दछ, तर वास्तवमै सफल भएको कारण विभिन्न कारकहरू तल आउँछन् र यो ती कारकहरूमध्ये एक हो।
तपाईंको भिडियोको सफलतालाई सुधार्नको लागि अन्य चीजहरू:
यूट्यूब भिडियो एसईओ - तपाईंको भिडियो को शीर्षक, विवरण, मेटा ट्याग, आदि अनुकूलन एक धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हो। भाग्यवस, हामी यो सेवा प्रस्ताव गर्दछौं! YouTube SEO
तपाइँको च्यानल अप्टिमाइज गर्नुहोस् - तपाइँले याद गर्नुहुन्छ कि कसरी १M + ग्राहकहरू भएको च्यानलहरू तपाइँसँग तुरुन्त भ्रमण गर्ने बित्तिकै पूरै फरक vibe हुन्छ? यो किनभने सम्भव भएसम्म पेशेवर हुनको लागि उनीहरूले उनीहरूको च्यानलको बारेमा सबै कुरा अनुकूलित गरेका छन्। हामी हाम्रो सेवाहरू माथि सार्न कोशिश गरिरहेका छैनौं, तर हामी एक पूर्ण च्यानल मूल्यांकन सेवा प्रस्ताव गर्दछौं जुन वास्तवमै अविश्वसनीय र आवश्यक छ यदि तपाईं वास्तविक YouTube सफलता चाहनुहुन्छ भने। YouTube च्यानल मूल्यांकन
उच्च गुणवत्ता च्यानल ब्यानर र भिडियो थम्बनेल - फेरि, हामी यो सेवा प्रस्ताव गर्दछौं। YouTube ग्राफिक डिजाइन
उत्कृष्ट सामग्री (स्पष्ट)
हाम्रा ग्राहकहरूले के भनिरहेका छन् हेर्नुहोस् जब उनीहरूले यूट्यूब इम्बेडहरू खरीद गर्छन्